Nwee ezumike ezumike a na-agaghị echefu echefu na Grandvalira ski Resort | Akụkọ Njem
Nwee ezumike ezumike agaghị echefu echefu na Grandvalira
Monica sanchez | | Andorra, Oge ntụrụndụ
Mgbe ị gbasịrị oge ọkọchị dị ọkụ, oge eruola ịkwadebe ihe ga-abụ ezumike ezumike a na-agaghị echefu echefu. Ebee? Gbanye Nna nna m, Ebe i nwere ike na-eme oyi egwuregwu: ski. Ma obughi nani na you gha enwe obi uto mgbe ị na eji ụkwụ gị na ogwe aka gi jiri ụkwụ na ogwe aka gi, kama ị gha enwe ohere ihu uzo snow mara mma nke akuku Andorra a.
Ya mere, ka ị ghara ichefu ihe ọ bụla, ka m nyere gị aka ịdepụta ndepụta nke ihe ị ga-achọ iji mechaa afọ ahụ n'ụzọ kachasị mma: iji ncheta pụrụ iche nke ụbọchị gị na Grandvalira n'uche gị.
1 Kedu ihe na ebe bụ Grandvalira?
2 Kedu ihe omume a na-eme n'oge oyi?
3 Kedu ihe m chọrọ ịga na Grandvalira?
4 Ebe ịgbazite ihe?
Kedu ihe na ebe bụ Grandvalira?
Ọ bụ ebe ezumike nke emepụtara na 2003 nke dị na Pyrenees, n'ime Onye isi nke Andorra. Ọ bụ mpaghara ski kachasị ukwuu na Pyrenees, ebe o nwere ihe dịka 210km nke mkpọda, nke si n’etiti obodo gaa n’ọwụwa anyanwụ, na-eru oke na France. Enwere ike inweta ya site n'okporo ụzọ isii dị iche iche, na-esote usoro nke Valira de Oriente osimiri, nke bụ: the Pas de la casa, nke Grau Roig, nke Soldeu, Ndị Tarter, nke Canillo na Encamp.
Ogologo kacha nta dị mita 1710, nke kachasị elu bụ 2560m. O nwekwara canonons 1027 snow, nke bi na 136km. Ya mere, ịnwere ike ịnụ ụtọ snow ahụ na-enweghị nsogbu ọ bụla, ebe ọ bụ na a na-enye ọtụtụ ọrụ ka onye ọbịa ahụ wee nọrọ ụbọchị ụfọdụ, ezinụlọ ya ma ọ bụ ndị enyi ya. Ọrụ dị ka cafeteria, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, enyemaka mbu, ụlọ oriri na ọ fastụ fastụ ngwa ngwa, lọ akwụkwọ ọta akara, ski / snow ụlọ akwụkwọ, na-adọba ụgbọala, na n'ezie ụlọ mposi.
Kedu ihe omume a na-eme n'oge oyi?
N'ime oge udu mmiri, enwere ọtụtụ ọrụ dịgasị iche iche na-eme n'etiti etiti ihu igwe a mara mma. Enwere ọtụtụ, na ọbụlagodi ndị na-enweghị mmasị ski ma ọ bụ ndị na-ahọrọ ime ihe ndị ọzọ, ha nwere ike ịnwe ezigbo ọ .ụ.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịme ihe mbanye, nke nkịta nkịta na-adọkpụ, gbaa ịnyịnya iji jiri snow, obe-mba ski ma obu abali ski, mbadamba, njem njem okirikiri, mụta ski na mpaghara maka ndị mbido site n'enyemaka nke onye nkuzi,… Na nkenke, site na ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme, ị gaghị enwe oge iji chee echiche banyere ike ọgwụgwụ 😉.
Kedu ihe m chọrọ ịga na Grandvalira?
Ihe na-agaghị efu na akpa njem gị bụ ihe ndị a:
Akwụkwọ edemede: iji rute Grandvalira ị ga-agarịrị Andorra, nke a bụ mba na-anaghị achọ visa maka mba ọ bụla. Ihe dị ezigbo mkpa bụ na ị ga-ebu ezigbo kaadị njirimara ma ọ bụ paspọtụ na akwụkwọ ezinụlọ.
Uwe elu oyi: n'oge oyi, na ndị ọzọ na ebe dị elu, ọnọdụ okpomọkụ, nke kacha nta na nke kachasị, dị obere, nke mere na ọ nwere ike iru -10ºC n'ụzọ dị mfe. Yabụ, iji zere oyi, ị ga-eyi uwe na-ekpo ọkụ nke dịkwa mma, dịka nke ị ga-ahụ na ụlọ ahịa egwuregwu.
Igwefoto foto: Mgbe ị na-aga njem, igwefoto bụ ihe dị mkpa iji weghara oge kachasị mma. Jide n'aka na ị na-ewere chaja gị ka ị wee nwee ya njikere mgbe niile.
Ekwentị mkpanaka: ọ bụ ezie na anyị maara na ị naghị ahapụ ya n'ụlọ, ọ dị mkpa na ị ga-enwe ya mgbe niile na batrị zuru ezu na ị ga-ewere ya, n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ ga - enyere gị aka ịbịakwute ndị ị hụrụ n'anya, mana ọ ga-aba oke uru ma ọ bụrụ na enwee mkpa.
Ihuenyo anwu: anyanwụ, ọ bụrụgodị na ọ naghị ajọ oke ọkụ, nwere ike imebi akpụkpọ ahụ. N'ihi nke a, a na-atụ aro ka ị buru karama ude iji tinye ihu na aka gị.
Igwe ugogbe anya: a ghaghi ichebekwa anya eze kpakpando.
Achọrọ m ikpori ndụỌ dị mma, ọ dị mma. Mana ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị, ebe ọ ga-adabere na ma ụbọchị gị na ebe ezumike dị ịtụnanya.
Ebe ịgbazite ihe?
Ọ bụrụ na ịnweghị, ma ọ bụ na ịchọrọ ịhapụ oge ịlele, ị nwere ike ịgbazite ihe site na na-agba ọsọ na Grandvalira. Nwere ike nwee akpụkpọ ụkwụ gị, na skis gị ma ọ bụ snowboard naanị site na ịga n'otu n'ime ọtụtụ ụlọ ahịa na ebe a na-egwu mmiri; ọbụna na hotels ha na-arụkwa ọrụ a maka ndị ahịa ha, ma n'ikpeazụ, ha na-enye ego na ụlọ ahịa ndị kacha nso ebe obibi.
Skis: site na euro 16 (ndị nke ụdị Bronze), euro 21 (Silver) na euro 27 (Gold).
Snowboard maka ụmụaka ruo afọ 12: euro 18.
Ski akpụkpọ ụkwụ: site na 9,50 euro (Silver) na euro 11 (Gold).
Akpụkpọ ụkwụ maka ụmụaka ruo afọ iri na abụọ: Euro 6.
Okpu ndị okenye: Euro 5.
Okpu okpu: Euro 3.
Ihe mkpuchi: Euro 10.
Site n'ụzọ, ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na ị mee otu ihe karịrị mmadụ iri atọ, ị ga-enwe ego pụrụ iche.
Yabụ ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ iji ụbọchị ole na ole n'ime otu n'ime ebe ama ama kacha mma n'ụwa, gaa Grandvalira. Will gaghị akwa ụta ya 😉.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Andorra » Nwee ezumike ezumike agaghị echefu echefu na Grandvalira
Osimiri kacha mma na Galicia